egosi: Martin Vrijland
A jụrụ m n’oge na-adịbeghị anya ma m chọrọ ịkwado ngagharị iwe nke ndị ọrụ ugbo. Eji m azịza dị nkenke ma doo anya. N'ezie ana m akwado ngagharị nke ndị ọrụ ugbo, mana anyị ekwesịghị ịgakwuru ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ihi na ọ bụ nsogbu ahụ 'na mbụ'. Mkpesa na Netherlands abụghị ihe karịrị ike zuru oke. You ga-[…]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 October 2019	• 7 Comments
Ọ bụ akụkọ ọzọ dị otú a nke nwere ike ịbụ nke a pịrị apị ozugbo site na mpempe ihe nkiri nke Peter R. de Vries. Ma o nwere ụkwụ n’ụkwụ elu nke ukwuu nke ụgbọ elu Transavia, yabụ enweghị ike inwe ihe ọ bụla gbasara ya. John studio John de Mol na Talpa enweghịkwa ikike, n'ihi na John […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 October 2019	• 4 Comments
Mgbagha mkpochapụ na ndị na-egosipụta ihu igwe na-akpọ gị oku ka ị kụọ ọbụna ego ka ukwuu site na ntinye nke usoro ụtụ isi zuru ụwa ọnụ. Ebee na China na India ha anaghị etinye aka na ara ihu igwe na ọkụ ọkụ nke China gbara ọkụ na ala nke 3x na - ewepụta ọkụ eletrik karịa mmepụta ọkụ eletrik dum nke […]
gbara akwụkwọ Nnupụ Mmebi, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 October 2019	• 6 Comments
Akpata inupụ Mmebi ahụ enwere otu ọrụ ọkachamara dị ka anyị si mara ya site na mbughari nke ndị CIA ji ọtụtụ afọ chụpụ "ndị ọchịchị" ma wụnye ụdị ọchịchị onye kwuo uche America. Ọ bụ usoro nke 'ngosipụta udo' na ụbọchị eze-dị ka mmemme oriri na egwu na ọtụtụ nzukọ na-emetụ n'obi, ebe […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 October 2019	• 6 Comments
Ọ bụ ntakịrị ihe ọchị dịka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Dutch si meghachi omume ụnyaahụ maka mwakpo ndị Turkey na Northern Syria. Ọ bụ n ’ụlọ mgbasa ozi mba ụwa niile ka Turkey bịanyere aka na US ma Trump akpọpụrụ ndị agha ya ka ha wee buso mwakpo ndị Turkey agha. 'Mọstad mgbe e risịrị nri' […]
gbara akwụkwọ Nnupụ Mmebi, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 October 2019	• 1 Comment
Ọ dị mma, ịgaghị agwa onye ọ bụla nke nwere mmachi na egwuregwu mgbasa ozi na egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mkpesa Mwepu Mwepu, nke na enyeghi ikike ikikere obula, ndi igwe onyonyo nke igwe mmadu na - ejide ya nke oma ma nwude ya abughi ihe ngosi. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu nju aka […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 October 2019	• 4 Comments
Ndị omempụ ọgba tum tum dị egwu nke na-egbu onye ọ bụla, Mocro Mafia, mwakpo na Parool na Telegraaf (opekata mpe, ihe onyonyo ahụ kwesịrị ime ka anyị kwenye). 'Site na EU na mgbochi ụwa' na 'gas zuru oke n'ihu n'ọchịchị etiti'. Dengọnarị ihu igwe na 'anyị ga-abanye n'ime afọ 12'. Nationalists megide Islamization. Ndị kwere ekwe na-ekwu okwu na ndị na-ebo ebubo akụkọ ụgha. Anyị bụ ndị akaebe nke […]
Ejiri 'ihu igwe agaghari' ihu igwe site na echiche imebi iwu, ndoro-ndoro ochichi aka nri na inwe mmechuihu
gbara akwụkwọ Nnupụ Mmebi, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 October 2019	• 15 Comments
Akụkọ 'okpomoku zuru uwa' bụ egwuregwu eji nlezianya ewulite nke ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi na ndị ama ama ama na-arụ ọrụ dị mkpa. Agaghị agọnarị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ejikọtala mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke aka nri na steeti 'ndị na-agọnarị' na ndị na-akwado izu ụka. Anyi na-akpọ nke a ‘iwuli ika’ ma ọ bụ ‘ika’. Na […]
Ndị na-akatọ Greta Thunberg bụ nwoke na nwanyị na-akpata mmejọ omume na-efu ụmụaka na-enweghị isi na-enweghị isi ': njedebe nke ihe kpatara ya.
gbara akwụkwọ Nnupụ Mmebi, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 September 2019	• 5 Comments
Akụkọ Greta Thunberg na-aghọwanye nke ọma karịa ụzọ isi kpochapụ ụdị nkatọ ọ bụla na ebumnuche, mana na ndabere nke mmetụta uche. Na ngwụsị izu a, ezigara m ozi oge m na Facebook dị iche iche ma gwa m na mmenye akwụkwọ m gafere oke omume omume ịnakwere. Na […]
Text To Speach (TTS) na hologramụ nke ndụ gị na Microsoft Hololens 2
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 September 2019	• 4 Comments
Ọtụtụ ka nwere ike na-enwe obi abụọ banyere echiche na anyị nwere ike ibi na ụwa ụwa n'ọdịnihu. Ebe anyị ka na-eji ụzọ ntinye bandwidth ngwa ngwa maka ụbụrụ anyị, dịka anya, ntị, imi, ire, mmetụ na ihe ndị ọzọ, BCI (Brain Computer Interface) sitere na Neuralink (otu n'ime ụlọ ọrụ Elon Musk) ga-anọrịrị na [ ...]
Nleta nile: 13.084.101
Eke op Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'